ကမ္ဘာ့အသန်မာဆုံးလို့ လူတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့ ကလေး ( ၅ ) ဦး - Shwe Khit Online TV
HomeAmazingကမ္ဘာ့အသန်မာဆုံးလို့ လူတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့ ကလေး ( ၅ ) ဦး
ကမ္ဘာ့အသန်မာဆုံးလို့ လူတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့ ကလေး ( ၅ ) ဦး
September 16, 2021 Yan Amazing, World Top 0
ပရိသတ်ကြီးကို အခုတစ်ခါမှာ ပြောပြပေးချင်တာကတော့ ကမ္ဘာ့အသန်မာဆုံးလို့ လူတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့ ကလေး ( ၅ ) ဦး အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီကလေး လေး တွေက ဘယ်သူတွေ ဖြစ်မလဲ ဆိုတာကို တော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com
၁ ။ Richard Sandrak
အခု ပထမဦးဆုံး ပြောပြပေးမှာကတော့ ယူကရိန်း နိုင်ငံမှာ မွေးဖွားပြီး လက်ရှိ မှာတော့ အမေရိကန် နိုင်ငံ မှာ နေထိုင်နေတဲ့ Richard Sandrak အမည်ရှိ ကလေး လေး အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ Richard ဟာ ကာယမောင် ၊ ကိုယ်လုံ ပညာရှင် နဲ့ သရုပ်ဆောင် အဖြစ် လုပ်ကိုင်နေပြီး Little Hercules လေး လို့လည်း လူသိများ ကြပါတယ် ။ လက်ရှိမှာတော့ Richard ဟာ ကမ္ဘာပေါ်က အသန်မာဆုံး ကလေး အဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရသူ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
သူ ဟာ အသက် ( ၈ ) နှစ် အရွယ်ထဲက ပြည့်စုံလှတဲ့ six pack ကြွက်သား ထွက်အောင် လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ တီဗီ အစီအစဉ်တွေ နဲ့ ရုပ်ရှင်တွေမှာ ပါဝင်ပြီး နာမည်ကြီးလာခဲ့ပါတယ် ။ Richard ရဲ့ ပြောကြားချက်အရ သူ့ရဲ့ တစ်နေ့တာ အချိန်တွေကို လေ့ကျင့်ရင်း နဲ့သာ ကုန်ဆုံးခဲ့ပြီး ရွယ်တူ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆော့ကစားတာတွေ မလုပ်ခဲ့သလို သာမန် ကလေး ဘ၀ လိုမျိုး မ‌နေခဲ့ရဘူးလို့လည်း ပြောပြခဲ့ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် အစားအသောက်မှာ ဆိုရင်လည်း သကြားလုံး နဲ့ တစ်ခြား ကျန်းမာရေး မညီညွတ်တဲ့ အစား အစာတွေပါ ရှောင်ကျဉ်ခဲ့ရတယ်လို့ ပြောထားပါသေးတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၂ ။ Andrey Kostash
နောက်ထပ်ပြောပြပေးမှာကတော့ Andrey Kostash လို့ ခေါ်တဲ့ ယူကရိန်း နိုင်ငံဖွား ကလေး လေး အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ Kostash ဟာ အသက် ( ၅ ) နှစ် အရွယ်တည်းက ခန္ဓာကိုယ် ကြံ့ခိုင်ဖို့အတွက် လေ့ကျင့်ခဲ့ပြီး အသက်အငယ်ဆုံး ကာယမောင် တွေထဲက တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ အသက် ( ၆ ) နှစ် အရွယ်မှာတော့ Kostash ဟာ အကြိမ်ပေါင်း ( ၃၀၀၀ )‌ လောက် ကို လုံး၀ မနားပဲ ဒိုက်ထိုးနိုင်နေပြီ ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
သူ ဒိုက်ထိုးခဲ့တဲ့ ကြာချိန်ကို မှတ်ထားကြည့်ကြတဲ့ အခါ ( ၂ ) နာရီနဲ့ ( ၂၉ ) မိနစ် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး Kostash ကတော့ ဒီ့ထက်ပိုပြီး မြန်အောင် ဒိုက်ထိုးနိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်ချင်နေပါတယ်တဲ့ ။ ဒါ့အပြင် Kostash ရဲ့ အကောင်းဆုံး ဒိုက်ထိုးပြခဲ့တဲ့ စံချိန်ကတော့ အကြိမ် ပေါင်း ( ၆၀၀၀ ) ဒိုက်ထိုးခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အကြိမ်ပေါင်း ( ၄၀၀၀ ) လောက် ရောက်တည်းက စံချိန် အသစ်တင်နိုင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၃ ။ CJ Senter
ဒီတစ်ခါ ပြောပြပေးမှာကတော့ “Workout Kid “ လို့ နာမည်ကြီးတဲ့ CJ Senter အမည်ရှိ ကလေး လေး တစ်ယောက် အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ CJ ဟာ အသက် ( ၁၀ ) နှစ် အရွယ်ကတည်းက သူ့ရဲ့ workout စွမ်းရည်တွေနဲ့ လူတိုင်းကို အံ့အားသင့်အောင် လုပ်နိုင်ခဲ့သူပါ ။ နောက်ပြီး CJ ဟာ သူ့ရဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း အစီအစဉ်တွေကို သွင်းထားတဲ့ DVD တွေကို ရောင်းချခဲ့ပြီး တစ်ခြားကလေးတွေ အတွက် ကျန်းမာစွာ နေထိုင်ဖို့နဲ့ အာဟာရ ရှိအောင် ဘယ်လို စားမရလဲဆိုတာတွေကို သင်ပေးခဲ့ပါသေးတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
နောက်တစ်ချက်က CJ လေ့ကျင့်ခန်း ပြင်းပြင်းထန်ထန် လုပ်ရတာကို ကြိုက်နှစ်သက်သူ တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ လျို့ဝှက်ချက်ကတော့ ခန္ဓာကိုယ်ကို လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပြီး ကျန်းမာတဲ့ အစားအစာတွေကို စားပေးတာပါတဲ့ ။ အခု အခါမှာတော့ အသက် ( ၁၇ ) နှစ် အရွယ် ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ CJ ဟာ သူတည်ထောင်ထားတဲ့ Fitness Company ကို ဦးဆောင်နေပြီး ကလေးတွေ အတွက် သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လေ့ကျင့်ခန်း လမ်းညွှန်ပုံစံ တွေကို DVD ပုံစံနဲ့ ဖြန့်ဖြူးပြီး ရောင်းချပေးခဲ့ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၄ ။ Liam Hoekstra
Liam Hoekstra ကိုတော့ ( ၂၀၀၅ ) ခုနှစ်မှာ မွေးဖွားခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာတော့ မီချီဂန် ပြည်နယ်မှာ နေထိုင်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ Liam ဟာ မွေးလာကတည်းက myostatin muscle hypertrophy လို့ ခေါ်တဲ့ ရှားပါး အခြေအနေ တစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ် ။ Hypertrophy ဆိုတာ ကြွက်သားထု တိုးတာကို ခေါ်တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီလို အခြေအနေတွေကြောင့်ပဲ Liam ဟာ မွေးဖွားပြီး ဒုတိယမြောက် မွေးနေ့ မရောက်ခင်တည်းက ပရိဘောဂ တစ်ချို့ကို ရွေ့နိုင်နေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
နောက်ပြီး Liam ဟာ တစ်ခြား ကလေးတွေ ထက် ကြွက်သားထု ( ၄၀ ) ရာခိုင်နှုန်း ပိုပြီး များပါတယ်တဲ့ ။ ဒါ့အပြင် သူဟာ ယုန်တစ်ကောင်လိုမျိုး လျင်မြန်မှုရှိပြီး ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်း အဆီပါဝင်မှုနှုန်း မရှိသလောက် နည်းပါတယ် ။ ထူးဆန်းတာက သူ့ရဲ့ အရိုးတည်ဆောက်ပုံတွေနဲ့ ကြွက်သားထုတွေ ဟာ အလျင်အမြန် ကြီးထွားလာတာဖြစ်ပြီး ဒီလို ကြီးထွားလာလို့ နှလုံးကို ထိခိုက်မိတာမျိုးလည်း မရှိပါဘူးတဲ့ ။ လက်ရှိမှာတော့ Liam ဟာ Muskegon Chief ဟော်ကီအသင်းရဲ့ Squirt B အသင်းမှာ ပါဝင်ကစားနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၅ ။ Giuliano Stroe
အခု နောက်ဆုံးပြောပြပေးမှာကတော့ Giuliano Stroe လို့ ခေါ်တဲ့ ရိုမေးနီးယား နိုင်ငံသား ကလေးလေး တစ်ယောက် အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ Giuliano ဟာ အသက် ( ၂ ) နှစ် အရွယ်ကတည်းက သူ့ရဲ့ မိဘတွေနဲ့ အတူ Gym သွားပြီး လေ့ကျင်းခန်းတွေ စလုပ်နေပါပြီ ။ ဒါ့အပြင် ( ၂၀၀၉ ) ခုနှစ်မှာတော့ ကမ္ဘာ့အသန်မာဆုံး ကောင်လေးအဖြစ်လည်း ဂင်းနစ် မှတ်တမ်း စာအုပ်ထဲမှာ စံချိန်တင် နိုင်ခဲ့ပါသေးတယ် ။ နောက်ပြီး Giuliano ဟာ အလေး ဘောလုံးကို သူ့ရဲ့ ခြေထောက် ကြားထဲမှာလည်း Hand Walk ( ၃၃ ) လှမ်း အမြန်ဆုံးလှမ်း နိုင်တဲ့ စံချိန် တစ်ခုလည်း တင်ထားပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
ဒီစတန့်ပြကွက်ကိုတော့ အီတလီ နိုင်ငံက တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသတဲ့ တီဗီအစီအစဉ်တစ်ခုမှာ Guiliano လေးက လုပ်ပြခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် နှစ် အနည်းငယ် ကြာမှာတော့ သူ ဟာ လေ့ကျင့်ခန်း တစ်မျိုး ဖြစ်တဲ့ ခြေထောက်က မြေကြီးကို မထိပဲ ဒိုက်ထိုးရတာကို လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့စံချိန်တစ်ခု ထပ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ လက်ရှိမှာတော့ Guiliano ဟာ သူ့ရဲ့ မိဘတွေနဲ့အတူ အီတလီနိုင်ငံမှာ နေထိုင်နေပြီး ဘောက်ဆင် ပြိုင်ပွဲ တစ်ချို့ နဲ့ ကာယမောင် ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
အခုပြောပြပေးထားတာကတော့ ကမ္ဘာ့အသန်မာဆုံးလို့ လူတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့ ကလေး ( ၅ ) ဦး အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ နောက်ပိုင်းတွေမှာလည်း အခုလိုမျိုး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို တင်ဆက်ပေးမှာမို့လို့ Shwe Khit ကို စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပေးကြပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com
အမေရိကန် ပင်တဂွန်မှ ဗီးနပ်စ် ဂြိုဟ်သားများ အကြောင်း
ရုတ်တရက် ကြည့်ရင် အထင်နဲ့ အမြင်ကို တက်တက်စင် လွဲစေမယ့် ဓာတ်ပုံများ